Emailvision na Pinterest: Ntụtụ Kọntaktị Igbe mbata Gị | Martech Zone
Emailvision na Pinterest: Kpaa Aka Mbata Gị
Tuesday, April 24, 2012 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Echere m na nke a bụ ezigbo ihe pụrụ iche nke Pinterest ya mere achọrọ m ịkọrọ ya ndị na-agụ akwụkwọ anyị. Anyị niile maara nke ahụ Pinterest bụ otu n'ime isiokwu kachasị ewu ewu ụbọchị, ma site ugbu a ruo Mee 31st, Nlele email na - enyere ndị na - ere ahịa aka iji kọmpụta akwụkwọ mgbasa ozi iji mekwaa ọkwa ọzọ - yana nsonaazụ - maka mkpọsa ahịa ahịa email ha.
A na-akpọ ndị na-ere ahịa ka ha tinye email ha Ntụtụ Igbe mbata gị. N'ebe a, obodo Pinterest (na ndị ahịa ndị ọzọ) nwere ike ịlele ma "dị ka" mkpọsa ha. N'ezie, ihe eserese eserese ga-emegharị na ntanetị mbụ nke ntanetị, nke ga-enyere ha aka ịpị aka ọzọ wee mepee. The email na ọtụtụ amasị ga-enweta onye okike ohere ịnata ọrụ okike n'efu site na ụlọ ọrụ imepụta Emailvision.
Tags: igbenhazi imewePinterest
Ekwela ka ihe niile mebie na usoro ihe omuma
Ike nke n'ime mmadụ